Wasiir Cukuse oo Booqasho ugu tegay Abwaan Laab-Saalax oo Qalliin Caafimaad loogu sameeyey Hargeysa | Saxil News Network
Wasiir Cukuse oo Booqasho ugu tegay Abwaan Laab-Saalax oo Qalliin Caafimaad loogu sameeyey Hargeysa
Hargeysa(Saxilnews.com)- Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Somaliland Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse), ayaa shalay Cusbitaalka Gargaar ee magaalada Hargeysa ku booqday Guddoomiyaha Fannaaniinta Xiddigaha Geeska Abwaan Xasan Saleebaan Dhuxul (Laab-saalax) oo Qalliin Caafimaad loogu sameeyey Cusbitaalkaas, isagoo laga qalay Qabsin.
Wasiirka, ayaa Booqday Abwaanka oo ay inta badan Fannaaniinta Xiddigaha Geesku hareero joogeen, isla markaana waxa uu sheegay inay Wasaarad ahaan u booqdeen Abwaan Laab-Saalax in ay Kharashka Caafimaad ee Qalliinkiisa ku baxayo inta ay awooddo ka bixiso. Waxaanu Allaah uga beryey in uu Abwaanka Caafimaad buuxa siiyo.
“Xasan-Laabsaalax waxa uu ka mid yahay Abwaannada da’da yar kuwooda ugu muddokarsan wakhtigan, maanta (shalay) waxaa loo sameeyey qalliin yar oo fudud. Waxa jira isaguna Abwaan kale oo Afgudhiye la yidhaahdo, wuxu joogaa Boorame, Abwaankaas dhawr goor oo hore waannu booqannay oo waannu ugu tagnay Dhakhtarka.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka Warfaafinta Somaliland Cabdillaahi-Cukuse.
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Somaliland Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse) oo sii watay hadalkiisa waxa uu intaas ku ladhay oo yidhi; “Abwaankanna waannu u nimi, maantana Wasaaraddu waxay u timi inay Kharashkiisa Caafimaad bixiso inta awooddeeda ah. Waxaan Illaahay uga baryeynaa inuu Caafimaadkiisa u soo wada celiyo, immikaba wuu caafimaad qabaa oo qalliinkiisu ma ahayn qalliin wayn oo laga argaggaxo.”
Sidoo kale, Guddoomiyaha Kooxda Xiddigaha Geeska Abwaan Xasan Saleebaan Dhuxul (Laab-saalax) oo isagoo jiifa halkaas kula hadlay Saxaafadda, ayaa sheegay inuu fiican yahay, waxaanu yidhi; “Aad baan u caafimaad-qabaa, waan wanaagsanahay. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Kooxda Xiddigaha Geeska iyo ILLAAHAY oo Caafimaadkayga sidii ugu habboonayd iga yeelay aad baan ugu mahad-naqayaa, waanan fiicanahay.”